Chelsea waxay qorsheynaysaa inay keensato tababare cusub Hazard-na uu kooxda sii joogo (waa kee tababaraha beddelaya Sari?) – Gool FM
Haaruun February 13, 2019
(London) 13 Feb 2019. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in kooxda kubadda cagta Chelsea ee Ingiriiska ay soo wadato tababare Zinedine Zidane, kaasoo beddeli doona macallinka haatan kooxdaasi hoggaamiya ee Maurizio Sarri oo sii joogiddiisa Stamford Bridge uu mugdi galay.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa isla dhex maraysa in wixii ka dambeeyay guuldarradii 6-0 ee ay Chelsea Axaddii kala kulantay Manchester City ay u badan tahay in Sarri uu shaqadiisa waayo, maadaama natiijadaasi ahayd mid xanuun badan.
Tababare Sarri ayaa haatan haysta laba isbuuc si uu u badbaadsado shaqadiisa, waxaana kulammada lagu kala ogaan doono mustaqbalkiisana waxaa ka mid ah labada ciyaar ee ay Chelsea la yeelan doonto Malmo iyo labada kulan ee xiga ee ay la kala ciyaari doonto Manchester United iyo Manchester City.
Dhanka kale laacibka Chelsea Eden Hazard ayaa xilli ciyaareed wacan la qaadanaya Chelsea maadaama 32 kulan oo uu u saftay dhammaan tartammada kala duwan uu u dhaliyay 15 gool, isagoo sidoo kalena sameeyay 10 caawimaad, waxaana heshiiskiisa ‘The Blues’ uu dhacayaa dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Hazard oo 28 jir ah ayaa sida lagu daabacay wargeyska ‘The Sun’ waxaa haddii Chelsea ay tababare u magacaabato Zidane ay ugu gogol xaari doontaa in uu xidigga reer Belgium heshiiska u kordhiyo naadigiisa, maadaama Hazard uu xiiseeyo inuu ka hoos ciyaaro macallinkii hore ee Real Madrid, khadka dhexena uga ciyaari jiray Faransiiska.
Zidane waxa uu Real Madrid u horseeday saddex Champions League oo xiriir ah intii uusan xilka tababarenimo iskiis isaga casilin bartamihii sanadkii la soo dhaafay.
Mauro Icardi oo laga qaaday Kabtannimada kooxda Inter (Yaa loo dhiibay astaanta kabtannimo?)